”Waa la igu is-istaagey!” – Baaris lagu wado gabdho Soomaali ah oo ay garaaceen cunsuriyiin caddaan ah + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waa la igu is-istaagey!” – Baaris lagu wado gabdho Soomaali ah oo...
”Waa la igu is-istaagey!” – Baaris lagu wado gabdho Soomaali ah oo ay garaaceen cunsuriyiin caddaan ah + Sawirro
(London) 22 Okt 2020 – Waxaa baaris rasmi ah lagu bilaabay weerar sinjiyeed lagu qaaday 3 gabdhood oo Soomaali ah, iyadoo ay iminka ku dhowaad 2 todobaad ay saraakiishu heli la’yihiin muuqaalladii CCTV-ga iyo wax marqaati ah kaddib markii ay baarista fureen, sida ay ogaatey BBC Newsnight.
Gabdhaha ayaa sheegay in ay cunsuriyad kala kulmeen xitaa booliiska taasina ay tahay midda lug jiidaysa baaritaanka, iyadoo ay Booliisku taa dafireen misna waxay qireen inay gabeen gabdhaha balse ay hadda arrinta karraarin doonaan.
Gabdhaha oo Soomaali wada ah oo lagu weeraray woqooyi galbeed London 22-kii Diseembar waxaa si xil leh u garaacay 7 nin oo caddaan ah.
Gabdhahan oo caways ka yimid ayaa waxaa TAXI dhigay Kilburn Lane in yar uun kahor aminta 3am ee saqda dhexe kaddib.
Gabdhaha ayaa la socdey Niyad Farah, 38-jir (sawirka), oo ku nool agagaarka meeshaas oo ay habeenkaa la dhici lahaayeen.
Nayad oo ku dhalatay Wales balse 13-sano London deganayd ayaa sheegtay inay in 2 naagood oo caddaan ihi ay soo hujuumeen xilli ay gabdhaha middood ay telefoonka ku hadlaysey ay Af Swedish ku hadashay, waxaana deeto wejiga ka feertey mid ka mid ah hablihii caddaanka ahaa oo dibedda ku sugayey.
In yar kaddibna waxaa soo weeraray 7 nin oo caddaan ah oo feer iyo laad kala daaley gabdhihii. Nayad ayaa si gaar ah dhibaato badani u gaartey.
Previous articleTurkiga oo laba dal oo Muslim ah ka iibinaya hub nooc cusub ah oo uu sameeyey + Sawirro
Next articleSawirro lagu soo daayey baraha bulshada & su’aalo kulul oo ka dhashay (Akhri su’aalo ku socda nidaamkii Siyaad, jabhadihii & shacabka?)